Miezaha mihitsy aloha mahazo ny hafa
Rehefa miresaka ny hoe toe-tsaina fototra entina miatrika ny fiainana dia matetika izay mahakasika ny tena manokana hatrany no tonga ao an-tsaina. Tsy azo lazaina ho mivelatra tanteraka anefa ny olona iray, na atao hoe mahomby amin'ny lafiny rehetra aza, nefa manana disadisa eo amin'ny fiaraha-monina. Mitaky finiavana sy fandavan-tena lehibe, noho izany, ny ezaka hahazo ny hafa, izay tsy maintsy fantarina amin'ireo lafiny dimy maha olona. Dingana voalohany amin'izany ezaka izany ny fifehezan-tena tsy hitsaratsara foana.
Ny fitandremana hiatrehana ny coronavirus andiany faharoa
Naseho ny : 31 marsa 2021
Tanjon'ny olona rehetra ny ho salama. Ireo mpiasan'ny fahasalamana dia tsy mpitsabo fotsiny fa manampy antsika hitahiry sy hikojakoja ny fahasalamana. Tsy tokony hiandry aretina fa mbola salama dia karakaraina ny fahasalamana : lanjalanjaina ny sakafo, ny tori-maso, sy ny fampiasam-batana sy saina. Ity andiany faharoa ity dia tsy ahitàna firy ny fisehoana teo aloha fa hainga kokoa ny fivoarany ka mila fitandremana...
Pejy 2 amin'ny 13